Soo dejisan Mumble 1.2.12 – Vessoft
Soo dejisan Mumble
Hunu-hunulayn – software aassaasiga ah ee isgaarsiinta cod. Muuqaaladan ugu weyn ee software ka mid ah: saldhigyo dhawaaqa, isgaarsiinta group, la duubay sheekada, waxaa dheer of users on saaxiibo liiska iwm hunu-hunulayn si toos ah u siyaadiyaa Hufnaan ay ka dhawaajiyeen oo Fayda buuq, bixinta tayo wanaagsan leh ee isgaadhsiinta. Software waxa ka mid ah qalab si ay u maareeyaan server ka abuuray awoodda oggolaado ama la duudsiyo xaqa user. Hunu-hunulayn ka kooban yahay qaybo in la midaynaysa kulan oo kala duwan oo muujinaya xubnaha channel oo u ifi ah wakhtiga wadahadalka.
Isgaarsiinta cod tayo sare leh
Set A weyn ee qalabka
Mumble Software la xiriira:
العربية, Français, Español, Deutsch... Clownfish for Skype 4.35 Standard iyo Portable